Namni yeroo jalqabaaf koronaavaayirasiin qabame 'Patient zero' eenyu? kana baruun maaliif fayyada? - BBC News Afaan Oromoo
Namni yeroo jalqabaaf koronaavaayirasiin qabame 'Patient zero' eenyu? kana baruun maaliif fayyada?
Barbaachi nama yeroo jalqabaaf koronaavaayirasiin qabamee itti fufeera.
Aanga'oonni Chaayinaa fi ogeeyyiin biyyattii madda dhibee koronaavaayirasii(Covid-19) fi nama jalqaba dhibee kanaan qabame adamsuu irratti xiyyeeffataniiru.
Nama yeroo jalqabaaf dhibame ''patient zero'' baruun maaliif dhimma ijoo ta'e?
''Patient zero'' jechuun nama yeroo jalqabaaf dhibee haaraa mul'ateen qabame jechuudha.
Dhibee tasa mudatee akkaan adunyaarra faca'e kan akka Covid-19 kanaan nama yeroo jalqabaaf qabame baruun dhibeen kun akkamiin akka mudate, yoom akka mudatee fi maalirraa akka jalqabe hubachuuf fayyada.
Garuu nama yeroo jalqabaaf koronaavaayirasiin qabame baruun rakkoo guddaa ta'eera.
Nama jalqaba koronaavaayirasiin qabame baruun tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuuf gargaaravirus's path of transmission
Aanga'oonni Chaayinaa koronaavaayirasiin yeroo jalqabaaf kan mul'ate Muddee darbe gaafa bultii 31 ta'uu himan.
Guyyaa sanarraa eegalee ka'umsi vaayirasichaa gabaa nyaataa guddicha magaalaa Wuhaan keessatti argamu Huanan kan foon bineensota bishaan keessa galanii fi bineensota biroo itti gurguramuu waliin walqabsiifame.
Magaalaa Wuhaan bakka vaayirasiin kun itti mul'achuu eegaleedha.
Namoota Chaayinaa keessatti koronaavaayirasiin qabaman 75,000 keessaa harki 82 Wuhaan keessatti argamu, akka ragaa Yuunivarsitii John Hopkins'tti.
Koronaavaayiras hammam yaachisaadha?
Qorannoon barruu 'Lancet Medical Journal' jedhamurratti maxxanfame garuu namni jalqaba dhibee Covid-19'n qabame kan barame Muddee 1,2019 ta'uu ibse, namni qabame sunis giddu gala gabaa magaalaa Wuhaan keessatti argamu Huanan waliin tuttuqqii akka hin qabne ibse qorannoon kun.
Doktarri gameessi Hospitaala Wuhaan kan qorannoo gaggeeffame keessatti hirmaatan Wu Wenjuan BBC tajaajila Afaan Chaayinaatti akka himanitti namn jalqaba qabame sun nama jaare, kan dhibee waa irraanfachuutiin dhibamanii turaniidha jedhan.
"Namni dhibame sun gabaa nyaataa sanarraa fermaataa afur fagaatee jiraata. Waan dhukkubsatuuf gabaa ba'eeyyuu hin beeku.'' jedhan.
Akka doktarri kun jedhanitti guyyoota itti aanan keessattis namoota sadirratti mallattoon dhibee Covid-19 mul'ateera, kanneen keessaa lama ammoo namoota gara giddu gabaa sana deeman miti.
Qorannaa kan biraadhaan ammoo jalqaba wayita dhibechi haala ammaa kanaan hin tatamsa'in dura namoota dhibamanii hospitaala seenan 41 keessaa 27 giddu gala gabaa sana namoota deemaniidha.
Kanaafuu yaadi qorannaa (hypotesis) kan koronaavaayirasiin osoo namaa-namatti daddarbuu hin eegalin dura bineensotarraa namatti darbe jedhu gara dhugaatti madaaleera, akka Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti.
Koroonaavaayirasii: Hammeenya koronaavaayiras maatii dhukkubsattootaa irraa
Koronaavaayiras: Koriyaan Kaabaa lammiilee biyya alaa qofaatti tursiifte
Kornaavaayiras: Hubeetti guyyaa tokkotti namoonni 242 du'an
Koronaavaayiras: Daa'imman maaliif baay'inaan koronaavaayirasiin hin qabaman?